Barataan Anuwaar Tasfaayee jedhamu Yunvarsiitii Diillaatti saaxinii uffataa keessatti fannifamee keessatti du'ee argamuu isaa yunvarsiitichi beeksiseera | OROMIYAA TIMES
Leave a Comment	/ Ethiopia / By Chala Dandessa / January 28, 2020 January 28, 2020
Du’uu barataa Yuunvarsiitii Diillaa duuba iccitiin jiru maali?
Anuwaar Tasfaayee barataa yuunvarsiitii Diillaatti du’ee argame.
Barataan Anuwaar Tasfaayee jedhamu Yunvarsiitii Diillaatti saaxinii uffataa keessatti fannifamee keessatti du’ee argamuu isaa yunvarsiitichi beeksiseera.
Godina Buunnoo Beddellee aanaa Cooraa Qumbaabeetti dhalatee kan guddate Anuwaar Yunvarsiitii Diillaatti barataa waggaa 1ffaati jedhan maatiin isaa.
Obbo Tasfaayee Wandimmuu abbaa barataa Anuwaaridha. Mucaan isaanii bara darbe dhukkubsachuun yunvarsiitii irra barnootasaa addaan kutee wal’aansa fudhataa akka ture himan.
Bara kanas erga fayyee gara yuunvarsiitiitti deebi’uun barnoota isaa hordofaa akka ture BBCtti himan.
Du’a isaa ilaalchisee “bilbilli nuuf bilbilame Anuwaar hospitaala Phaawuloos galeera kan jedhu ture. Egaa ni dhukkubeetin se’e malee du’ee akka reeffi isaa achitti ergame naaf hin galle ture,” jedhan.
Nutu hin dhageenye malee namni baay’een Feesbuukii irratti barreessaa ture nan jedhan ergasii namootni yoo nutti himan jedhan Obbo Tasfaayeen.
Fannifamee du’uu barataa Yunvarsiitii Diillaa duuba iccitiin jiru maali?
Anuwaar Obboleessa kooti kan jette Amiinaan Yunvarsiitii Diillaa irraa shamareen tokko naaf bilbiltee waan guyyaa du’a isaa sana irra ture natti himteetti jette.
Sagalee ishees waraabdee akka harkaa qabdu himuun akkas naan jette jechuun tokko lamaan waan ishee irraan dhagahe jette BBCtti himte.
”Anuwaar hiriyyaakooti. Waliin baranna. Gaafa du’e sana hanga sa’a 11:00tti waliin teenyee ispiriisi dhugaa turre.
‘Lubbuu barattootaa oolchuuf barnoota addaan kutuuf murteessine’
Ajjeechaa Waldiyaa ‘cimsine balaaleffanna’ jedhe MNO
Doormii koo keessa mucaan tokko bahaaf galma na dhorkeera. Yeroo hundaa natti dhaadata. Osoo maatiin koo qarshii naaf erganii barnoota kana dhiiseen gala jechuun natti himee ture,” jechuun obboleettiin Anuwaar, Amiinaan waan shammarree hiriyyaa Anuwaar ofiin jette irraa dhagahe jette BBCtti himte.
Dabalataan shamarreen kun poolisiin barataa Anuwaar waliin doormii tokko galuufi Anuwaar na doorsisa jedhe sanaan osoo harka dhiqatuu argee ‘ijjiin indatitaxeb’ jedhee yeroo dubbatu dhagaheera jechuun natti himte jette Amiinaan.
Barataa Anuwaar Tasfaayee barataa yuunvarsiitii Diillaatti du’ee argame.
Barattuu yuunvarsiitichaa akkana jechuun obboleettii Anuwaaritti himte irraa odeeffanno kana mirkaneessuuf bilbilleerra.
Nageenya isheef waan sodaattuuf maqaan ishee akka dhahamu akka hin barbaanne himuun dhuguma Anuwaar waliin gaafa Jimaataa akka waliin turaniifi ‘ispiriisii’ waliin dhuguun galan BBCtti himte.
Odeeffannoo poolsiin harka kee hin dhiqatiin jedhe barataa Anuwaar waliin doormii tokko galuti dubbate jedhu mooraadhuma keessatti odeeffannoo akka dhageesse himte.
Anuwaar jaalallee magaalaa Beddellee irraa akka qabu himuun isheef bilbilee barattoota doormii tokko waliin galu waliin wal loluu isaa isheetti himee ture jette.
Barattuun kun odeeffannoo kana jaalallee Anuwaar irraa akka dhageesseefi isuma deebistee maatii isaatti akka himte dubbatti. ”Anatti maatiinkoo birrii naaf erguu didan, jireenyi natti dukkanaa’eera jedhee natti dubbataa ture jette.
Hiriyyaan isaa Beddelee jirtuuf bilbilee hanga samisteeraatti qofa asitti baratee addaan kutuun gara Beddellee deemuun ishee waliin barachuu akka barbaadu itti himuu isaa erga inni du’ee bilbilaan natti himteetti jette.
Yaadaafi gaaffii kana Daariktera Sab-Qunnamtii Yunvarsiitii Diillaa kan tahan Obbo Asnaaqee Idirisiif kaasneerra.
Obbo Asnaaqeen “nuyi kan argine doormii isaa keessatti saaxinii uffataa meetira lama dheeratu keessatti ansoolaadhaan fannifameeti.
Suuraas kaasneerra. Yeroo sanas poolisiin naannoo, polisiin Federaalaafi qaamoleen nageenyaa kaanis achi turan” jedhan.
Reeffa isaas qorannoof gara hospitaala ispeeshaalaayizdii Phaawuloositti erginee bu’aa qorannoo isaa eegaa jirra jedhan.
Tarii wal dhabdeen yoo jiraates odeeffa7nnoo hin qabnu jedhan. Poolisiin qorachaa akka jiru himuun barattootni afur Anuwaar waliin jiraachaa turan to’annoo jala oolaniiru jedhan.
Abbaan Anuwaar Obbo Tasfaayeen mucaan isaanii rakkina homaa akka hin qabneefi waanti of isa ajjesisuuf sababa tahu homtuu hin jiru jedhan.
Maallaqaanis firoota dabalatee gargaarsa gaarii gochaafii akka turan himan.